Dowladda Imaaraatka ayaa 12 dal oo Somalia ay ka mid tahay ka joojisay Viisaha dal ku galka… – Hagaag.com
Dowladda Imaaraatka ayaa 12 dal oo Somalia ay ka mid tahay ka joojisay Viisaha dal ku galka…
Posted on 20 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa 12 dal oo Somalia ay ka mid tahay ka joojisay Viisaha dal-ku-galka, sababo ku aadan heerka dalalkaasi ee xanuunka COVID-19.
War ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraatka ayaa lagu sheegay in dalalkaasi lagu daray liiska dalalka ay xaaladdooda cudurka COVID-19 ay sareyso, sidaasi daraadeedna aan muwaadiniinta dalalkaasi la siin doonin dal-ku-galka dalkaasi.
Wadamada xanibaaddan lagu soo rogay waxaa ka mid ah Somalia, Yemen, Syria, Iraq, Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan, Libya iyo Kenya.
Tani ayaa sidoo kale saamayn ku yeelan doonto ganacsatada, ardayda, dalxiise-yaasha iyo weliba dadka kale ee u dhashay dalalkaasi, ee Transit-ka ku ah garoomada dalkaasi.
Madaxa Maareynta COVID-19 ee Wasaaradda Caafimaadka Somalia, Dr. Cabdulqaadir Yuusuf Aadan (Jalaaludiin) ayaa sheegay inaanu garanayn sababta ay Xukuumadda Abu Dhabi ugu dartay Somalia dalalka ay ka joojisay dal-ku-galka.
“Ma garan karo waxa ay Dowladda Imaaraatka ku qiimeysay Somaliya, mana fahmi kari waxa ay liiskaasi ugu dartay. Waxaa jira wadamo badan oo Somaliya ka daran, oo xanuunka si xowli ah uu ugu laba kacleeyay, oo xaaladaha la helo uu saddex god, afar god ka badan yahay, macnaheedu toban kun iyo ka badan oo qof in maalintii laga helo. Anaga hadda isbuuciiba waxaan mareynaa 81 qof oo keliya.” Ayuu yiri Dr. Jalaaludiin oo la hadlay BBC.